Cayilkii Aabihii Ee Ay Man United Ku Diiday In Ay Matthijs de Ligt Kula Soo Saxiixato Oo Uu Ugu Danbayn De Ligt Ka Jawaabay. - Gool24.Net
July 21, 2019 Saed Balaleti
Muddadii uu wararka suuqa kala iibsiga haystay difaaca kooxda Juventus ku biiray ee Matthijs de Ligt waxaa soo baxay war sheegayay in maamulka kooxda Man United ay sanad ka hor lacag aad u hoosaysa ku heli kareen De ligt balse ay ku diideen in aabihii uu buurnaa ama uu cayilsanaa.
Bishii May ee sanadkan, Man United ayaa la sheegay in ay Matthijs De Ligt miiska u saartay dalab uu todobaadkii mushaar ahaan kooxdeeda ugaga qaadan lahaa 250,000 kun oo gini, laakiin waxa uu difaaca reer Holland iska diiday in uu Old Trafford ku biiro balse markaas waxaa la helay xog sir daaha ka rogtay.
SIDOO KALE AKHRISO: QISHKII UGU WEYNAA: Ciyaartoyga Ku Guuleystay Abaalmarinta Xiddiga Yurub Ee Sanadkan Oo Qarsoodi Loo Helay & Dhibcaha La Kala Helay - Messi, Van Dijk Mise Cristiano Ronaldo?
Waxaa markaas soo baxay war sheegayay sabab qariib ahayd oo ay Man United sanad ka hor ku diiday saxiixa ay difaaca kooxaha Yurub ugu waa wayn isku haysteen ee Matthijs De Ligt taas oo dad badan lama filaan ku noqotay.
Xagaagii la soo dhaafay ee sanadkii 2018 kii waxay Man United iska diiday fursada ay kula soo saxiixan kartay Matthijs De Ligt iyada oo mid ka mid ah ragga suuqa u qaabilsan Man United uu sabab uga dhigay in aabaha dhalay De Ligt uu aad u buuran yahay ama u cayilan yahay oo ay ka cabsadeen in uu De Ligt aabihii ka dhaxlo cayilka badan.
Laakiin ugu danbayn Matthijs De Ligt ayaa arintan ka jawaabay isaga oo ku tilmaamay waxyaabihii maalin kasta cusbaa ee laga qorayay intii uu mustaqbalkiisu cirka ku shareernaa.
De Ligt ayaa sheekadii buurnaanta ama cayilka aabihii ee la sheegay in ay Man United saxiixiisa ku diiday waxa uu ku tilmaamay waxyaabihii maalin kastaba cusbaa ee isaga laga qori jiray taas oo uu sheegay in ay ku qasabtay in uu iskaga socdo wax walba oo laga qorayay.
De Ligt oo ka hadlaya in cayilka ama buurnaanta aabihii ay Man United u diiday ayaa yidhi: “Maalin kastaba waxaa jiray wax cusub. Si lama filaan ah, xataa aabahay ayaa aad u cayilsanaa ama u buurnaa waxayna ahayd sababtii ay mid ka mid ah kooxuhu iila saxiixan wayday. Taasi waxay kugu qasbaysaa in aad socoto”.
De Ligt ayaa beeniyay in lacagta ay kooxda Juventus mushaar ahaanta ugu soo bandhigtay ay saamaynta ugu wayn ku yeelatay in uu kooxihii kale ee doonayay ka leexday.
“Lacagtu wax door ah kamay ciyaarin doorashadayda kooxda cusub, qof kasta oo aniga i garanayaa, taas wuu ogyahay, qof kastaaba waxa uu xaq u leeyahay fikradiisa, taasna waan ixtiraamayaa”.ayuu De Ligt hadalkiisa sii raaciyay.